Europapark waa park ugu weyn oo ugu caansan oo dhan of Europe, midig ka dib markii Disneyland. Si kastaba ha ahaatee, in aan sababta aan u doortay. Waa mid ka mid ah beeraha dheeldheel ugu fiican Yurub ee our opinion sababtoo ah rullaluistemadka-coasters. Waxaad heli doontaa inaad fuusho qaar badan oo iyaga ka mid ah iyo kuwo badan oo run ahaantii u gaar ah. Waxaad heli doontaa si aad u hubiso Arthur – ka duubin-Siriyalka cusub in isku-dar ah mid ka mid ah gudaha / dibedda la geeyo madow iyo sidoo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)